Askari dilay Bajaajle oo Maxkamadda Ciidamada kasoo muuqday – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Akariga Maxkamada Ciidamada Qalabka sida ka soo muuqday ayaa ka tirsanaa Ciidamada Booliska Magalada Baladweyne waxaana uu 27-kii bishii 8aad ee sanadkan uu dilay Alle ha u naxariistee Marxuum Yaasiin Cali saneey oo ahaa wada Mooto Bajaaj.
Dhimashada Yaasiin Cali Saneey ayaa sababtay isku-dhacyo u abaabulnaa qaab qabiil taas oo sii murjisay xaalada waxayna dhalisay dhimashada 4 kale iyo 2 dhaawac ah,waxana taasi sababtay in loo yeero Khuburo ka socda Maxkamada Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya.
Mahad Xuseen Shiidow oo ah askariga eedeysanaha ayaa lahor keenan Maxkamada Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya,iyada oo mas’uuliyiinta Maxkamada Ciidamada ay sheegeen in sibareer ah uu u dilay wadaha Mooto Bajaajta.
Guddoomiyaha Maxkamada Darajada koowaad ee Ciidamada Qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute ayaa Edeysanaha weydiiyey in dil bareer ah u geystay Yaasiin Cali Saneey sidoo kalena uu dhaawac u egeystay Cabdi Dukow Axmed 27-kii bishii 8aad ee sanadkan.
Gaashaanle Abuukar Yuusuf cabdi oo ka tirsan Saraakiisha Dowaldda u soo wakiilada wixii dhacay ayaa isna sharaxay qaabkii uu u dhacay dilka Marxuum Yaasiin Cali Saneey oo ahaa darawal Mooto Bajaaj.
“Markii Mootada la joojiyey marxuumka waxa uu ka codsaday askarigii joojiyey in uu rakaab uu sido uu geeyo kadibna uu u soo laaban doono,intii ay wada hadlayeen marxuumka iyo askarigii joojiyey Mahad wuu ka daba yimid wuxuuna soo istaagay dhankii uu taagnaa askariga maahane dhankii kale wuxuuna ku yiri maxaad ii soo dhaafeysaa qorigiisa ayuu ku fiiqay laba xabadood ayuuna ku riday sida aan Xafiiska xer ilaalinta aan u soo gudbinay fooqa laba xabadood oo uu ku riday marxuumka.
Sidoo kale Maxkamada Ciidamada ayaa waxaa la horgeeyey 6 eedeysano oo midi maqan yahay kuwaas oo wax laag weeydiiyey weerar ay u abaabuleen qaab qabiil kaas oo sababay dhimashada 2 ruux iyo dhaawaca 1 kale.
Ugu dambeyn Saraakiisah Maxkamada ciidamada Qalabka sida ee soomaaliya ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in Go’aanka Maxkamada dib laga soo saari doono.
Dhageyso:-Guddiga Aqalka sare ee loo diray Jubbaland oo sheegay in Dowladda faragelin ku heyso Maamulkaas
Gabar lagu dhex dilay Jaamacad ay dhiganeysay Magalada Muqdisho